ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ ၁ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအထူးကုငါ
ကုမ္ပဏီ: ကော့ Media Group သို့
Location: အနောက် Palm Beach တွင် FL US
အကြောင်းအရာအထူးကုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကို execute ဖို့လူမှုမီဒီယာအဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
ရှုခင်းနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့နှင့်အတူပူးပေါင်း။ အခြိနျမှနျမှ, သင်ဖြစ်လိမ့်မယ်
အဖြစ်ကောင်းစွာအချို့အရေးအသားလုပ်ဖို့မျှော်မှန်းထားသည်။ ယင်းအပေါ်ယိဘာမှအပေါ် Catching
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများကိုအတူတက်လာမှအပေါ်ကိုရေတွက်။ သငျသညျ Are
·သတင်းသတိပေးချက်များသောင်မတင်နှင့် Palm Beach တွင် Post ကိုကို update
သတင်းနှင့်အမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူမိုဘိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များ, SEO ဆိုသည်မှာ optimization, ဆွဲဆောင်မှု
ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အားပုံရိပ်ယောင်များ, ဗီဒီယို, မာလ်တီမီဒီယာ နှင့်ဆက်စပ်လင့်များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းမှ traffic ကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်ဟုပစ္စည်းများ
·မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့မှအကြောင်းအရာ, စောင့်ကြည့်ပိုကောင်းအောင်နှင့် post
ကြောင်း Facebook နှင့် Twitter ကိုပရိသတ်တွေထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်
· Monitor site ကိုမက်ထရစ်, ဒေတာများနှင့်ပြည်တွင်းရေးအစီရင်ခံစာများမှ
· Check ကြှနျုပျတို့၏ website
/ ဗိုင်းရပ်စ် "ပစ္စည်းယိသတင်း" နှင့် "။ အချက်ပေးအယ်ဒီတာများ, သတင်းထောက်များနှင့်ဝက်ဘ်န်ထမ်းများ
မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ် updates များကိုကျနော်တို့လက်ရှိပုံပြင်များဘို့လိုအပ်တယ်စေခြင်းငှါ, အလံမဆိုနှင့် ပတ်သက်.
မိုဘိုင်း app ကိုစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်
ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့တန်းတူအတိုင်းအတာအတွက်မိုဘိုင်း site ကို
·, layout ကိုဖန်တီးပါ
Palm Beach တွင် Post ကိုစတိုင်နှင့် AP ပုံစံလျှောက်ထား
အဘယ်အရာကို plagiarism ပါဝငျနှင့်သရေဖျက်မှုဥပဒေလိုက်နာ
အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု / ထုတ်လုပ်မှု။
ကော့ Media Group သို့ CoxReps ၏အမျိုးသားရေးကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီများပါဝင်သောအနေနဲ့ပေါင်းစပ်အသံလွှင့်, ထုတ်ဝေ, တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် CMG Valpak လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာကော့ပစ်မှတ်မီဒီယာ, မြောက်အမေရိကရဲ့ဦးဆောင်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်တဦး, ပိုင်ဆိုင် Savings.com, ငွေစုဘို့ဦးဆောင်အွန်လိုင်းရင်းမြစ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်လက်ရှိ 14 ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းဒေသခံ cable ကိုရုပ်သံလိုင်း, 57 ရေဒီယို station ရှစ်နေ့စဉ်သတင်းစာများနှင့်တစ်ဒါဇင်ကျော် Non-နေ့စဉ်စာပေနှင့် 100 ဒစ်ဂျစ်တယ်န်ဆောင်မှုထက်ပိုမိုပါဝင်သည်။
CMG လက်ရှိ 30 မီဒီယာစျေးကွက်ထက် သာ. သွင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 52 သန်းပုံနှိပ်နှင့်အွန်လိုင်းသတင်းစာစာဖတ်သူများထက်ပို 32 သန်းတီဗီကြည့်ရှု, နှင့်4သန်းရေဒီယိုနားထောင်ထက်ပိုမိုအပါအဝင်အပတ်စဉ်ထုတ် 14 သန်းအမေရိကန်များ, ရောက်ရှိ။
ကော့ Media Group သို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာအွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်စစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး www.coxmedia.com
အဖွဲ့အစည်းက: ကော့ Media Group သို့
မူလတန်းတည်နေရာ: အမေရိကန်-FL အဘိဓါန် West Palm Beach တွင်-2751 S ကို Dixie Hwy
Unposting နေ့စွဲ: ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-02-27
ယခင်: အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ Sandro Miller ကန့်က၎င်း၏အနီရောင်မိုင်ယာမီတည်နေရာမှာပြခန်း Rouge အတွက်ပြကွက် '' Lynch ကစားခြင်း '' ပြရန်မှ
နောက်တစ်ခု: Lynx Technik 12G နိုင်စွမ်း yellobriks လွှတ်တင်